Turkiga oo sheegay in saddex muwaadintiisa ah lagu dhaawacay weerarada Axadii ka dhacay magaalada Muqdisho | Salaan Media
Turkiga oo sheegay in saddex muwaadintiisa ah lagu dhaawacay weerarada Axadii ka dhacay magaalada Muqdisho
Hargaysa,16.4.13 (SM)Wasaarada arrimaha dibeda ee dowlada Turkiga ayaa sheegtay iney cambaareynayaan qaraxyadii maalmo ka hor ka dhacay magaalada Muqdisho oo mid ka mid ah lagu beegsaday gaari ay wateen shaqaale samafal ah oo kasoo jeeda dalka Turkiga markii gaarigooda lagu dhuftay gaari kale oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey.
War-saxaafadeed ka soo baxay wasaarada arrimaha dibeda Turkiga ayaa lagu sheegay in xukuumada Ankara ay diyaarad sida gurmad caafimaad ay u soo direyso Somalia si wax loogu qabto dadka weerarada Axadii ku waxyeelobay.
Qoraalkaas ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkaas uu dhaawac ka soo gaaray 3 ka mid ah muwaadiniinta u dhashay Turkiga ee mashaariicda kala duwan ka wada Somalia, waxaana geeriyootay wadihii gaariga ay shaqaalahaasi saarnaayeen oo ahaa muwaadin Soomaali ah sida war-saxaafadeedkaas ku xusan.
Raisul wasaaraha Turkiga Recep Dayib Ordogan ayaa qoraalkaas lagu sheegay inuu khadka telefanka kula hadlay muwaadiniinta u dhalatay dalkaas ee ku dhaawacmay qaraxyada ka dhacay Muqdisho.
Bakar Buzdag oo ah raisul wasaare ku-xigeenka dowlada Turkiga ayaa sheegay inay xukuumad ahaan ka xun yihiin weerarada noocaas ah ee shaqaalahooda lagula beegsaday Muqdisho, isagoo xusay ineysan saameyn ku yeelan doonin siina wadi doonaan mashaariicda dib u dhiska iyo samafalka ee ay ka wadaan Somalia.
Afhayeenka Al-shabaab Sheekh Cali Maxamuud Raage (Sheekh Cali Dheere) ayaa sheegay in weerarkii lagu qaaday samafalayaasha Turkiga ah ee ka dhacay Muqdisho ay iyagu ka dambeeyeen uuna farriin u yahay shisheeyaha ku sugan dalka Soomaailya.
Sheekh Cali Dheere ayaa sheegay in weerarkaas uu ahaa mid daba-socday weerarkii lagu qaaday maxkamadda gobolka Banaadir.